Vaovao kitra | NewsMada
Lasan’ny Arsenal ny amboara
Norombahin’ny Arsenal ny amboaran’i Angletera (FA Cup), taranja baolina kitra. Resiny teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa tery 2 no ho 1, ny Chelsea. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja Wimbley, ny asabotsy lasa teo. Baolina roa nampidirin’ilay Gaboney, i Pierre Emerick Aubameyang, tamin’ny alalan’ny “penalty” (28 mn), sy ny teo amin’ny minitra faha-67. I Christian Pulisic kosa no namono ny baolina tokana ho an’ny The Blues, minitra faha-8. Tsy afaka hiatrika ny “Europa league” izany ny Chelsea.
Mpilalao mendrika i Dybala
Voahosotra ho mpilalao mendrika nandritra ny volana jolay lasa teo, tamin’ny fiadiana ny ho tompondakam-pirenen’i Italia (Seria A), ilay Arzantin, i Paulo Dybala. Lohalaharana ao amin’ny Juventus de Turin. Nahavita dingana goavana ny lehilahy tamin’ireo fihaonana nataony, taorian’ny fiverenenan’ny fifaninanam-pirenena italianina. Na eo aza izany, baraingo ny ho fiatrehany ny lalao ampahavalon-dalana miverina, hikatrohan’ny Juventus amin’ny Olympique Lyonnais, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, ny asabotsy 7 aogositra ho avy izao.
Nandresy ny ekipan’i Rojo Be
Nihtohy ny alahady lasa teo ny fiadiana ny ho tompondakan’i Seychelles. Nifandona ny ekipan’ny Lapasse, misy an’i Rojo Be, mpilalao fahiny tao amin’ny Ajesaia, miaraka amin’i Florent, tao amin’ny Adema, nifanandrina tamin’ny Foresters, misy an’i Tigana (ex Akademia Ny Antsika). Nivoaka ho mpandresy tamin’ny isa 4 no ho 2 ny La Passe FC ka anisan’ireo nahafaty baolina i Rojo Be ary “penalty” kosa ny an’i Tigana. Mila mandresy ny Lightstar amin’ny lalao farany, raha te ho tompondaka.